'मलाई झुक्याइयो, लज्जित हुनुपर्‍यो', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'क्षमाप्रार्थी छु' spacekhabar
'मलाई झुक्याइयो, लज्जित हुनुपर्‍यो', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'क्षमाप्रार्थी छु' दूतावासको पत्रबारे समयमै जानकारी नदिनेलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
प्रधानमन्त्री केपी ओली । फाइल तस्बिर ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विषादी प्रकरणमा आफूलाई झुक्याइएकाले लज्जित हुनुपरेको बताएका छन् ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित 'संविधानको कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुन:संरचना' विषयक अन्तर्क्रियमा उनले भारतबाट आएको पत्र गोप्य राख्दा आफू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले यसबारे खोजबिन भइरहेको र पत्र लुगाउने (गोप्य राख्ने) लाई कारबाही गरिने बताए ।
‘भारतबाट पात्र आएको रहेछ, तर मैले आएको छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेँ,’ ओलीले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास हुनु र मलाई जानकारी नदिनुले म लज्जित हुनुपर्योस । मलाई झुक्याइयो । यसप्रति म क्षमाप्रार्थी छु ।’
उनले भने, ‘दूतावासको पत्र आएको रहेछ । मलाई केही जानकारी भएन, दिइएन ।’ ओलीले थाहा नभएको कुरामा पत्र आएको छ भनेर भन्न नसक्ने भन्दै पत्रबारे थाहा नभएपछि आफूले सत्य कुरा गर्दा पनि ‘झूट’ भएको बताए ।
‘पत्र आएर पनि मलाई झूट बोल्न लगाइयो । भुलचुक र नियतवश के हो ? त्यो म बुझ्दैछु । खोज्दै छु । त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो गर्न तयार छु,’ ओलीको भनाइ छ ।
भारतीय दूतावासले पत्र पठाएर नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयवाट सरकार पछि हट्न लागेको समाचार आएपछि ओलीले त्यसको खण्डन गर्दै ‘कहाँ छ पत्र ? कसले पठायो पत्र ?’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले यस्तो बताएको २ दिनपछि दूतावासको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उक्त पत्र वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २६, २०७६, ०१:१७:००